Accueil > Gazetin'ny nosy > Pesta : Takon’ny propagandy sy ny fifidianana
Pesta : Takon’ny propagandy sy ny fifidianana
Toerana maro eto amin’ny nosy no voalaza fa misy pesta ankehitriny ary efa nisy ny olona maty noho izany tamin’ny volana septambra 2018 lasa teo iny. Ny pesta izay iaraha-mahalala fa isan’ny valan’aretina ateraka ny tsy fahadiovana sy ny fahantrana izay entin’ny voalavo sy ny parasy ka afindrany amin’ny olombelona.
Ny pesta mifindra avy amin’ny fisefoana no isan’ny mamely mafy eto amintsika amin’izao fotoana izao ka nampisy ny olona maty tany Befotaka, ary nisian’ny tranga tany Amoron’i Mania sy ny teto Antananarivo.
Tamin’ny volana septambra sy oktobra ary novambra 2017 lasa teo dia isan’ny vaovao lehibe ka nandraisan’ny fanjakana fampiatoana ny fampianarana mihitsy ity fahatongavan’ny pesta ity. Mbola vitsy nefa tamin’izany ny isan’ny olona maty sy azon’ny pesta raha ampitahaina amin’ny seho tamin’ny fiatombohan’ny aretina amin’izao fotoana aizao. Poa toa izay dia lany ny fanafody natao hiarovana amin’ity aretina ity teny amin’ny toeram-pivarotam-panafody manerana ny nosy. Nihazakazaka hatramin’ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena amin’ny fanomezana fanafody ho an’i Madagasikara. Nilaza mazava tsara ireo mpahalala iraisam-pirenena ity aretina ity fa ny taona manaraka ny fisehoany toa ireny dia mety ho mafimafy kokoa ny fisehony.
Ny mahagaga ankehitriny dia toa tsy miraharaha loatra intsony izany fahatongavan’ny pesta izany ny fanjakana. Mangingina avokoa hatramin’ny ministeran’ny Fahasalamana izay miandraikitra ity raharaha ity. Tsy misy akory na dia fandaminana manokana momba izany fa toa ny tsy misy valan’aretina ireny i Madagasikara. Hatramin’ny fako izay fototr’ity aretina ity no lasa mivangongo manerana ny toerana maro eto Antananarivo fa tsy vitan’ny kaominina intsony ny maka azy. Tsy maintsy mampihombo ity aretina ity indray ny filatsahan’ny ranon’orana iny miampy ny fako sy ny loto miparitaka etsy sy eroa.
Eo anatrehan’izany dia tsy misy mieritreritra ny zava-doza miandry azy ny vahoaka.
Takon’ny propagandy ankehitriny ny fiainam-bahoaka, tsy misy mijery ny fahoriana intsony fa variana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana ny fanjakana. Inona no ataon’i Rivo Rakotovao izay filoham-panjakana eo anatrehan’ireo rehetra ireo? Sa dia mipetraka hanao izay hahavita ny fifidianana fotsiny ihany satria tsy olom-boafidy fa voatendry araka ny Lalàmpanorenana ihany? Inona nefa no hitranga raha toa ka mihombo ity aretina ity amin’ny volana oktobra sy novambra ary desambra izay ao anatin’ny fifidianana tanteraka? Mampieritreritra ihany ny raharaha.